Downloads 30 291
Mpanoratra: Yannick Lavigne-Fred Banting-Rob Young, FSX & P3D ny format manan-tompo amin'ny Bluebear
21 / 10 / 2017: Version 2 ankehitriny mifanaraka amin'ny P3Dv4, nampiana fanavaozana vaovao, fiovan'ny toetr'andro (fitondran-tena tsara)
ary ny tontolon'ny fanavaozana sy ny zavatra kely.
18 / 04 / 2017: Nohavaozina tamin'ny fametrahana version 10.2. Ankehitriny 100% teraka FSX. Nampian'ny 8 fanambarana manokana. Hira vaovao vaovao. Miara-miasa amin'ny fiara virtoaly Prepar3D. Ny vokany vaovao.
Ny robine avo lenta Robx DR400 miaraka amin'ny HD na ny tabilao 2D, dia ahitana ny repetitive 8, feo mahazatra, 100% vaovao fanavaozana ho an'ny FSX ary P3D.
Robin DR400 dia tokana-maotera fiaramanidina hazavana be mpampiasa amin'ny fikambanana manidina, vokarin'ny ny orinasa Avions Pierre Robin, ankehitriny antsoina hoe Robin Aircraft.
Ary niseho tao 1972 amin'ny alalan'ny fanovana ny karazana DR300 (RD dia ny fanafohezana ny Délémontez sy Jean Pierre Robin). Raha ampitahaina ireo, samihafa lehibe roa dia midadasika kokoa trano fialan-tsasatray sorony sy ny fitaratra tafo izay tsary handroso fa tsy varavarana, foto-kevitra vaovao voalohany mampihatra ny HR-1 in 1969. Ny camber ny elany no mahatonga mora kokoa sy tsara kokoa no mamily fihinanam-bilona. Tampoka tao anaty fiara dia avo sy mazava kokoa.
Hitantsika ihany koa ny fahefana misy mikasika ny maodely samihafa miainga indrindra fa ny maotera, ny efitra dia mitovy. Tsy matanjaka modely, ho any 120 HP, dia antsoina hoe "2 + 2", izany hoe, ho an'ny olon-dehibe roa sy roa ny ankizy (na telo olon-dehibe), ny hafa rehetra dia quadriplaces ny 180hp mandray tsy misy olana 4 mpandeha, refueling ary ny sasany entana.
Ny famolavolana ny fiaramanidina antitra, dia ny ambany-elatra entoilée rafitra hazo dihedral tendron'ny elany. Ny ambany elany dia mamela ny tsara fahitana. Izany dia ny karazany Jodel, tena toetra. Manana bisikileta misy kodiarany telo fipetrahana fitaovana, mora kokoa ny hametraka fiaran-dalamby noho ny mahazatra.
Ary amin'izao fotoana izao mbola tena teo ihany ny ankamaroan'ny frantsay manidina fikambanana (nampamoahana an'i 50% ny frantsay mpahay siansa, zaridaina manidina Club), ary bebe kokoa be tany Eoropa. Ity fiaramanidina dia manana laza tsara na ho an'ny sekoly sy ny nivezivezy. (Wikipedia)
Mudry CAP-10 ho an'ny FSX
Robin R2160 Alpha & 160A ho an'ny FSX SP2